Kpido: stats ekwentị mkpanaaka | Martech Zone
Kpido: stats ekwentị mkpanaaka
Desktọpụ ekwentị na-agagharị agagharị maka Email Na-emeghe
Tuesday, June 19, 2012 Sunday, October 4, 2015 Adam Obere
Ekwetaghị m na m dị iche karịa ọtụtụ mmadụ. M na-elele email ogologo ụbọchị niile na iPhone m ka m wee nwee ike ịrụ ọrụ, enwere m ike ilekwasị anya na nsogbu ndị kachasị mkpa. Ngwaọrụ mkpanaka m bụ ngwa ọrụ m n'ịmeghe na ịhazi ozi m na-enweta. N'ezie, ọ gaghị emerụ ahụ mgbe emelitere ozi email ndị ahụ maka ngwaọrụ mkpanaka. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọzọ iji nweta ozi email gị na enyi na enyi, bụrụ
Ọnụ ọgụgụ Email Email
Mụ na ndị folks (na ndị nkwado), Delivra… anyị mepụtara ọhụụ a dị ịtụnanya nwere ihe niile ịchọrọ ịma maka otu ndị mmadụ si eji ekwentị iji nweta ozi ịntanetị ha. Delivra na-enye ndị ahịa ọrụ ịre ahịa email yana usoro ha. Ha bụ ụlọ ọrụ na - enweghị atụ na ndị ezigbo mmadụ na - eche maka ndị ahịa ha. Ahịa ahịa B NOTGH going pụọ n'oge ọ bụla n'oge adịghị anya! Delivra chọrọ inyere gị aka ịkwadebe mbọ ị na-agba n'ịntanetị ma nweta
Bụrụ onye Sameria Spam!
Monday, March 15, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Bill Dawson
Ndị Sameria Spam abụghị naanị jiri akaụntụ email ha iji kwurịta okwu, kamakwa na-enye aka na ikpochapụ spam maka ndị ọzọ. Na ngwụcha izu gara aga nne di m na-akọwa etu o si gbahapụ Yahoo! Akaụntụ email ma kwaga Gmail, n'ihi na ọ bụ, "jupụtara na SPAM na enweghị ike ịgụ ya." Ihe ọ na-amaghị bụ na omume a na-ewute ndị na-eweta ọrụ ịntanetị (ISPs), ndị na-ere ahịa na ndị spammers. Ndị na-enye ọrụ ịntanetị (ISPs) chọrọ nzaghachi iji melite ahụmịhe email gị. Na-enweghị
Kedu ihe kpatara ị ga-eji soro ndị na-eweta ngwa ngwa?
Mọnde, Febụwarị 4, 2008 Tuesday, February 5, 2008 Douglas Karr
Ọ bụ ihe ịma aka ịgwa ụlọ ọrụ nwere nnukwu akụ IT ma mee ka ha zụta ụdị ASP. Imirikiti ndị folks kwenyere na ọdịiche dị n'etiti ASP na ụlọ ọrụ sọftụwia kachasị dị na ya bụ na mmadụ na-ewepụta sọftụwia maka onye ahịa ya aka na nke ọzọ wepụtara na ntanetị ebe ngwa dị mfe iji debe. Na-ele ụlọ ọrụ ahụ anya n'ụzọ a, ha abụọ dị ka ụlọ ọrụ ngwanrọ. Nke ahụ enweghị ike ịbụ